Google Sangana ndiyo nyowani nyowani kune Skype uye Amazon Chime | IPhone nhau
Vhiki mbiri dzakapfuura, kutengesa kwepamhepo uye gore rebasa guru reAmazon rakaburitsa sevhisi nyowani yekukwikwidza neMicrosoft Skype kudana sevhisi, inonzi Amazon Chime. Asi zvinoita sekudaro Hausi iwo chete mukwikwidzi Microsoft's veteran vhidhiyo yekufona sevhisi iri kusangana munzira., sezvo hofori yekutsvaga (ini ndiri hofori) Google ichangobva kuzivisa Google Sangana chikuva chekuita mafoni evhidhiyo akatungamirwa, saAmazon Chime kunzvimbo yehunyanzvi, uko Google zvakare ine kukosha kwakanyanya. Google Meet ndiyo Google Hangouts nyowani inoitirwa mabhizimusi uye inosanganisirwa muG Suite.
G Suite ipakeji rezvishandiso zvinopihwa neGoogle kumakambani, ayo aimbove maHangouts ekufonera uye evhidhiyo mafoni, asi izvo zvatsiviwa neGoogle Sangana. Zvinoita kunge vakomana vanobva kuMountain View vari gehena-vakatsunga kupedza Hangouts zvachose uye zvachose, ishandise chete kushandiswa kwepachivande kana pamwe nekufamba kwenguva kunyangarika kuitira kuti Google Allo neGoogle Duo ive mameseji matsva uye vhidhiyo yekufona sarudzo pakati pevashandisi. Nguva ichataura.
Iko kushanda kweGoogle Meet kwakasiyana nezvatinogona kuwana nemaHangouts, kwatinongofanira kubaya pane iyi link kuti tiwane vhidhiyo kufona. NaGoogle Sangana izvo zvinoshanduka, sezvo isu tichizofanira chete pinda kodhi yemusangano inotibvumidza isu kuti tisvike yakananga vhidhiyo kufona. Aya macode mhando yepassword inogadzirwa yakanangana pamusangano wega wega. Google Meet ichavimba neGoogle Calendar kuti ipe ruzivo pamisangano iri kuuya uye nevanhu vachatora chikamu mairi.
Nepo ma Hangouts aine muganho wepamusoro wevatori vechikamu vekutanga, Google Meet inowedzera iyo nhamba kusvika makumi matatu panguva imwe chete. Panguva ino inongowanikwa chete kuburikidza newebhu meet.google.com, asi munguva pfupi ichave iri muchimiro chekushandisa kweIOS uye Android. Panguva ino inongoenderana neGoogle Chrome, saka haugone kuwana kana ukasashandisa Google browser, nenzira iyi zvese zvinogara kumba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Sangana ndiyo nyowani nyowani kune Skype uye Amazon Chime